सेक्सपियरबाट सिक्नुस् सफल हुन – Online BBC
सेक्सपियरबाट सिक्नुस् सफल हुन
बेलायती साहित्यकार विलियम सेक्सपियरको जन्म २६ अप्रिल १५६४ अर्थात् साढे चार सय वर्षअघि भएको थियो । तर, उनका थुप्रै कृति तथा नाटक आज पनि विश्वप्रसिद्ध छन् । १८ वर्षमै उनको विवाह भएको थियो । तर, विश्वप्रसिद्ध बन्नका लागि विवाह बाधक बनेन । मानिसमा ज्ञान बाँडिरहे । उनी अदभूत कल्पनाशक्ति भएका मानिस थिए । आज हामी उनै सेक्सपियरका केही महान् वाणी उद्धृत गर्दै छौँ, जो तपाईंको जीवनलाई पनि सुन्दर र सफल बनाउन महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा नयाँ पत्रिकाका विश्वास खड्काथोकीले तयार पारेको सामग्री :
कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई प्रेम गर्ने ? सधैँ द्विविधामा हुन्छौँ । यस विषयमा निकै सरल ढंगले गम्भीर कुरा भनेका छन् सेक्सपियरले, ‘तपाईं सबैलाई प्रेम गर्नुस् । तर, केहीलाई मात्र विश्वास गर्नुस् । कसैका लागि कहिल्यै गलत काम नगर्नुस् ।’
धेरै ठाउँमा हामी आफूलाई कमजोर आँकेर सहभागी हुँदैनौँ । यस्तो गतिविधि कति भूल हो थाहा छ ? पढ्नुस् त सेक्सपियरको यो भनाइ, ‘जुन खेल तपाईं खेल्नुहुन्न नि, तब हार्नका लागि पनि सक्षम हुनुहुन्न।’
Prev“सिंगापुरको सडक एसियाकै राम्रो, नराम्रोको सूचीमा नेपालको नेतृत्व”
Nextयसरी सम्भव छ विकास :चन्द्र भण्डारी